Marka aad Finland u soo guurto, waxaa liiska kuugu qoran arrimo badan oo ay tahay in aad xalliso, sida akoonka bangiga, caymisyada iyo khadka telefoonka ee Finnishka. Waxaan kuu uruurinay macluumaad ku saabsan arrimaha muhiimka ah.
Akawn ka furashada bangiga
Kaarka aqoonsiga ajnabiga
Wax iibsiga iyo xuquuqda quutaha
Liisanka baabuur wadida
Cimalada iyo labiska
Waxaad u baahan tahay bangi akawn si aad ku maamushid lacagtaada.Si hadaba taasi kuugu suuro gasho waxaa wanaagsan inaad is barbar dhig ku samaysid bangiyada iyo adeegyada ay bixinayaan, si aad u kala dooran kartid ka dani kuugu jirto iyo ka kale.
Markaad furanaysid bangi akawn, waxaad u baahan tahay baasaboor, kaarka aqoonsiga ee ajaanibta ama aqoonsi kale oo rasmi ah. Hadii aanad haysanin baasaboorti ama kaarka aqoonsiga ee ajaanibta, waxaa wanaagsan inaad hubiso nooca aqoonsi ee ay aqbali karaan bangiyadu.Mararka qaar bangiyadu waxay aqbalaan baasaboorka ajaanibka ee ay bixisay dawlada Finland, waraaqadaha safarka ee qaxootiga, ama aqoonsi kale oo safar kuu suuro galin karta. Xaalada qaarkood bangigu wuxuu kaaga baahan karaa cadaymo kale, hadii baasaboorkaaga ama aqoonsigaaga uu ku qoran yahay, in aan lagu cadayn karin qofkaa tahay.
Liisanka baabuurku kuuma noqon karo cadayn aqoonsi.
Markaad furanaysid akawn bangi, sida sharciga ah bangigu wuxuu ku waydiinayaa inaad cadayso arimahani, maxaad rabtaa inaad u isticmaasho akawnkaaga. Bangigu sidoo kale wuxuu hubin karaa taariikhdaada amaaheed. Bangigu wuxuu kaaga baahan yahay arimahani soo socda:
cinwaankaaga ama adareeskaaga Finland ama wadan kale
Hadii aad cashuur ka bixisid meel aan ahayn Finland, cinwaanka wadankaasi kale
Macluumaadka dadka xaqa u leh inay isticmaalaan akawnkaasi.
Markaad furanaysid akawn, waxaa dan kuu ah inaad dalbatid sidoo kale lambarka lagu galo internetka ee bangiga. Furitaanka laguu furayo lambarka internetka waxaad ku dhamaysan kartaa arimaha kale ee xafiisyada.Sikastaba ahaatee helida lumbarkani waxay maraysaa xeer adag si la mida akawnka oo kale. Xaaladaha qaar ma heli kartid lambarka bangiga ee internerka, xataa adiga oo le akawn.
Hadii rabto talo ku sahabsan arimaha banigaga, waxaad wici kartaa caymiska-iyo la talin maalgalinta (Fine). Adeegu waa u lacag la’aan macaamiisha, kaliya waxaad bixinaysaa qiimaha telefanka aad wacayso. Luuqadaha adeegu waa finish, iswiidhish iyo ingiriisi.
Talabixinta caymiska iyo maalgelinta
Isniin-Khamiis 9-16 saac
tel. 09 6850 120
Su’aalaha gaagaaban oo fudud waxaa ku weydiin kartaa iimaylka adigoo isticmaalaya luqadda Finnishka, Iswiidhishka ama Ingiriiska: info(at)fine.fi.
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaVakuutus- ja rahoitusneuvonta
Talabixinta arrimaha bangiga iyo caymiskaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaFinanssialan keskusliitto
Arrimaha bankiga ee ajaanibkaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Haddii lagu aqoonsado islamarkaasna si la aamini karo loo xaqiijiyay aqoonsigaada, boolisku waxey kuu ogolaan karaan aqoonsiga ajnabiga. Aqoonsigaada waxaa laga xaqiijin karaa dukumenti tilmaamaya aqoonsigaada qof ahaaneed. Haddii aadan heysan dukumenti noocaas ah, waxaa la isbarbar-dhigi karaa farahaada iyo faraha lagu keydiyay kaarka sharciga degitaanka ama kaarka joogitaanka. Waxaa kale oo lagaaga baahan yahay in aad:
heysato sharciga degitaanka ama kaarka degitaanka oo shaqeynaya ama xuquuqdaada joogitaankaada oo la diiwaangeliyay,
deegaan degmo ku leedahay Finland, iyo
in macluumaadkaaga lagu keydiyay nidaamka macluumaadka dadka.
Kaarka aqoonsiga ee ajnabiga waxaad ku caddeyn kartaa marka aad joogto Finland aqoonsigaada. Waxaad isticmaali kartaa isaga, tusaale ahaan marka aad Finland ka furaneyso xisaabaad ama akoon bangi. Si kastoo ay ahaataba uma isticmaali kartid kaarka sidi dukumenti safar oo kale marka aad u safreyso dibadda.
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaPoliisi
Kaarka aqoonsigaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Degaanka dartiis waxaa dan kuu ah inaad qaadato caymiska guriga. Caymiska gurigu wuxuu kaa ka bayaa tusaale ahaan shilalka guriga ka dhaca, sida alaabta guriga la dhigto oo jabta iyo alaabahaaga kaleba. Kireeyayaasha guryaha ayaa inta badan waxay shuruud ahaan doonayaan, in guriga la geliyo caymiska guriga. Waxaa kuu wanaagsan in aad shirkado badan oo kala duwan weydiisato codsiga beec gaarista. Hadii aad isticmaasho baabuur aad leedahay, wuxuu sharcigu waajib kaaga dhigayaa inaad qaadato caymiska gaadiidka.
Hadii aad rabtid inaad ka qaadato caymiska shakhsiga ah shirkadaha finishka ah, caadi ahaan waxay kaaga baahan yihiin kaadhka-keelada. Tusaale ahaan caymiska shakhsigu waa caymiska shilka qofka soo gaadhsiiya dhaawac, caymiska kharashaadka daryeelka iyo caymiska nolosha.
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaVakuutusfakta.com
Shirkadaha caymiska ee FinlandLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Markaad ka iibsatid Finland khadka felefoonka, waxaad helaysaa namber finish ah. Khadka telefoonka waxaa bixiya shirkado badan. Markaad furanaysid khadka telefoonka, waxaad u baahan tahay, nambarka shakhsiga ee Finland, iyo waa inaad cinwaan ku leedahay Finland. Waxaa waajib kugu ah inaad soo bandhigto macluumaadkaaga biil bixinta, inaad bixisay biilkaagii, sidoo kale inaanad lahayn calaamada aamindarada. Wayna ahayn waxaa waajib kugu ah si aad khadka u furato inaad bixiso deebaaji ama lacag horumarin ah.
Sidoo kale waxaad iibsan kartaa khadka ku shubashada. Markaa kaagama baahna numberka aqoonsiga shakhsiga ee finland iyo inaad cinwaan ku leedahay Finland toona. Khadka ku shubashada waxaa marka horeba lagu shubtaa in cayiman, kaasi oo hadli karto. Khadka ku shubashada waxaad ka iibsan kartaa tusaale ahaan R-kioskiga, Subermaarkidada ama internetka.
Markaad wacaysid dibada, waxaa dan kuu ah inaad hubiso, nambarkeebaa kuu jaban. Shirkado badan ayaa siiya macaamiishoda nambar jaban. Waxaad ogaataa, in sikastaba qiimuhu ku xidhan yahay, wadankaad wacayso.
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaPuhelinliittymat.fi
Shirkadaha laynka taleefanka ee FinlandLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaGlobetel
Telefoonada dibadda ee raqiista ahLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaSkype
Finland arimo badan waxaad ku dhamaysan kartaa adeegsiga internetka. Inta badan hay ’adaha dawliga ah iyo shirkaduhuba wadajir ahaan waad ku dhamaysan kartaa arimaha bogaga ayay ku leeyihiin internerka. Waxaa dan kuu ah inaad hesho xidhiidhka internet sida ugu macquulsan uguna deg-dega badan markaad timaado Finland.
Gurigaaga xidhiidhka internerka waad heli kartaa, markaad heshiis la gashid adeeg bixiyayaasha. Qiimaha adeeg bixiyayaasha waa kuu dan inaad is barbar dhigtaa, ka hor intaadan heshiis galin.Finland waxaa ka shaqeeya shirkado badan, kuwaasi oo bixiya adeegyo kala duwan oo xidhiidhka internetka ah. Shirkadahan waxaad ka heleysaa tusaale ahaan mashiinada wax raadintae e shabakadda marka aad ku qorto barta qoraalka ee ”internetliittymä”. Farqiga qiimayaasha xidhiidhinta internetku wuu badan yahay.
Si lacag la’aan ah internetka sidoo kale waxaad ka isticmaali kartaa meelaha laybareeriyada akhriska. Kaadhka-laybareeriga waxaad si lacag la’aan ah uga heli kartaa isla laybareeriga. Ka akhri macluumaad dheeri ah bogga InfoFinland safxadiisa laybareeriyada Maktabadaha . Sidoo kale maakhaayadaha qaar macmiilkooda waxaa u suuro gal ah inuu istimaalo internetka.
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Khadadka internetka iyo telefoonadaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Finland heerka sicirku wuu sareeyaa. Tusaale ahaan cuntada iyo adeegyada kaleba celcelis ahaan qiimo sare ayaa lagu iibiyaa marka la barbar dhigo wadamada kale ee yurub. Sicirka guryuhu way kala duwan yihiin in badan. Magaalooyinka waawayn way ka qaalisan yihiin in badan tuulooyinka yaryar.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qiimaha iyo sicirka maciishadaha kale ee Finland ka aqri bogga InfoFinland Heerka sicirka Finland .
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTilastokeskus
Qiimaha quurteyaasha ee wadamada YurubLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Guryaha kirada ee maalgelinta xorta ah qiimahoodaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Guryaha kirada ee dowladu taakuleyso qiimahoodaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaAsuntojen.hintatiedot.fi
Macluumaad ku saabsan qiimaha guryaha la iibiyo iyo kuwa la kireeyoLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Qofkasta oo iibsada alaab ama adeeg waa quute ama adeegte. Sharciga quutuhu wuxuu ilaaliyaa xuquuqda quutaha ee Finland. Hadii aad iibsato alaab, kuwaasi oo ay wax ka si yihiin ama ay xun yihiin oo aanad ogayn waxaad xaq u leedahay inaad hesho lacagtaadii ama laguu badelo alaabta.
Hadii aad alaab iibsato, kuwaasi oo aan hagaagsanayn, marka hore la xidhiidh iibiyaha. Hadii aad markaasi ku heshiin waydaan, la xidhiidh la taliyaha quutaha.
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaKilpailu- ja kuluttajavirasto
La-talintya quutahaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaSuomi.fi
Macluumaad ku saabsan xuquuqda quutahaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Gadiidka dadwaynuhu si wanaagsan bay u shaqeeyaan Finland. Tareenka iyo basaskaba waad ugu wada safri kartaa ku dhawaad dhamaan wadanka gudihiisa. Magaalooyin badan waxaad ku tagi kartaa diyaarad. Magaalooyinka waawayn iyo kuwa u dhawiba si wanaagsan bay uga shaqeeyaan gaadiidka maxaliga ahi. Gaadiidka maxaliga ahi waa basas caadi ah.
Ka akhri macluumaad dheeri ah bogga InfoFinland Gaadiidka Finland Gaadiidka gudaha Finland .
Finland waad baran gartaa liisanka baabuur wadida, hadii aad gaadhay. Hadii aad ku haysatay liisanka baabuur wadida wadan kale, xaalada ay ku xidhan tahay, sida kuu danta ah ee uu kuugu shaqayn lahaa.
Ka akhri bogga InfoFinland gadiidka Finland Gaadiidka gudaha Finland .
Finland cimiladu way ka qabawdahay wadamo kale oo badan. Cimalada dhexdhexaadka ah ee Finland jiilaaskii eber santigaraydh ayay ka hooseysaa iyo xagaagiina +10 santigaraydh bay kor u dhaaftaa.Guga iyo dayrta kulka cimaladu waxay u dhaxaysaa labadaasi dhexdooda.Jiilaalkii Filand waxaa dan kuu ah inaad ku labisatid dhar diiran. Ka akhri macluumad dheeri ah bogga InfoFinland Cimilada Cimilada Finland .
Finland ku dhawaad 200 jaraa’id baa kasoo baxa.Finland waxaa laga daawadaa afar telefeshan oo dawli ah iyo qaarkaloo badan oo ganacsi ah. Ka akhri macluumaad dheeri ah bogga InfoFinland saxaafada Finland Saxaafadda gudaha Finland .
Macluumaad ku sahabsan dhaqanka dadka finishka waxaad ka helaysaa bogga InfoFinland dhaqanka dadka finishka ah Hab-dhaqanka finnishka iyo dhaqanka dadka finishka ee shaqada Dhaqanka Finnishka .
Bogga Xafladaha ciidda ee Finnishka waxaa ku jira macluumaadka xafladaha Finland lagu xuso.